Ammaanka magangalyo doonka oo baaritaan dheeri ah lugu sameeynayo | Somaliska
Ammaanka magangalyo doonka oo baaritaan dheeri ah lugu sameeynayo
Laanta socdaalka dalkaan Iswiidhan ayaa shaaca ka qaaday in ay baaritaan dheeri ah ku sameeyn doonto ammaanka magangalyo doonka weeydiistay. Laanta ayaa sidoo kale sheegtay ineey kor u qaaday wadasheyn ay horey ula laheyd hey’adda nabad sugida ee dalkan .
Arrintan ayaa salka ku heeysa sida loola socon lahaa dadyowga la rusan yahay ineey halis ku yihiin ammaan dalka. Bisha luulyo ee sanadka innagu soo fool leh ayaa la filayaa in hey’adda nabad sugidda loo gudbin doono macluumaadka la xirriira xogta qaarkood ee magangalyo doonka ah ee dalkaan nagad galayadda weydiistay.
Dhinaca kale laantu waxaa ay dabaalka ka qaaday in xog kor u dhaafay 20.000 (Labaatan kun) ay u gudbisay ciidanka ammanka qaabilsan.
“Xilliggii xaggaaga ee aanu soo dhaafnay ayaan bilwonay in aan xogaha baarno, waana mid ciidanka suuragal uga dhigeeysa iney helaan xogta la xirriita dhammaan dadka magangalyadda ka dalbaday Iswiidhan, mana ahan oo keliya kuwa magangalyadda naga soo dalbaday ee waxaa sidoo kale ka mid ah dadyowga dalabka ku yimaada sidii ay ula midoobi lahaayeen eheladooda qaraabadood, ardeyda iyo shaqa doonka” sidaa waxaa yiri Oskar Ekblad oo ah madax qaaska ah ee waaxda ammaanka u qaabilsan laanta socodaalka.
Wuxuu sheegay in warbixinta ay u gudbiyaan ciidanka ammanka ay tahay nooc ka mid xogta ay ciidanku ku qiimeeyn kartaan shaqsiyaada sida magaca iwm oo uu ka gaabsaday inuu daaha ka roggo. Ugu dameyntiina wada shaqeynta laanta socdaalka iyo ciidanka ammanka u qaabilsan ayaa timid ka dib markii ay heshiis wada gaareen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka garabka midig ee xuluffda ah (Alliansen) bishii juun ee sannadkan. Heshiish-kan ayaa ah mid la xirriira siddii looga hortagi laha argaggagxisadda balse la soo gogol xaaray.
Baaritaanka noocan ah ahaa waxaa uu ahaa mid ku ekaa qaadistiisa marka uu qofka dalbado dhalashasdda dalka, balse laanta ayaa shaqsiga ay ka shakiso xogtiisa iyo degennaanshaha sharci u diri jirtay ciidanka ammanka. Sanadkii ina dhaafnayna waxaa ciidanka ammanka loo gudbiyey xog kor u dhaaftay toddobol boqol.
Waa maxay qiimaha dhalashada Sweden?
Sharciga keenista kharaabada ee 15 April.
Waraysi ku saabsan middeynta qoysaska soomaalida ee Sweden